अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली चल्यो (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली चल्यो (भिडियो)
अमेरिका । अमेरिकाको एक विद्यालयमा बुधबार गोली चलेको छ ।
उत्तर अमेरिकाको साउथ फलोरिडा हाईस्ककूलमा गोली चल्दा दर्जनौं घाईते भएका छन् । केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको आशङका गरिएको छ । गोली चलाउने व्यक्ति सोही स्कूलको पूर्व विद्यार्थी रहेको र उसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।